Global Voices teny Malagasy » Thailandy: Fatin-jazarano 2000 tao amina toeram-pivavahana Bodista · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Novambra 2010 5:21 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fahasalamàna, Lalàna, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Raha sendra misy fatin-jazarano iray tratra, matetika mivaivay ny fanamelohana no hita indrindra avy amin'ny sehatra mpitahiry nentin-drazana. Nefa inona no fepetra mifandraika azo raisina rehefa fatin-jazarano 2000  no hita any amina toeram-pivavahana Bodista?
Tsy eken'ny lalàna ny fanalàn-jaza any Thailand raha tsy mifanaraka amina fepetra. Azo atao ny manàla zaza raha nisy nanolana ilay vehivavy, raha misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamàny ny vohoka na tsy ara-dalàna ny zaza ao an-kibony. Voavinavina ho manodidina ny vehivavy 150 000 – 200 000  isan-taona no manantona toeram-pitsaboana tsy miankina, mba hanala zaza an-tsokosoko.
Mino ny Praiminisitra any an-toerana firenena fa efa mety tsara ny lalàna momba ny fanalàn-jaza. Ny soso-kevitra omeny dia ny fanabeazana  bebe kokoa ny tanora. Maneho hevitra manoloana izany fanambaràna izany i tulsathit, mpampiasa Twitter
togiab:  RT @tulsathit: Tsoriko fa manorisory ahy ny valintenin'ny Praiminisitra momba ny fanalàn-jaza tsy ara-dalàna: Mety tsara ny lalàna, tsy ao tsara ny lanja ara-sosialy, ary tokony hakatona ireo tobim-pahasalamàna tsy ara-dalàna.
Nanaitra ny solombavambahoaka  iray hanolo-kevitra ny tokony haha-ara-dalàna ny fanalàn-jaza. Nefa nanaitra ny Bangkok Pundit  ny tanjony, dia ny hampihena ny vahoaka “ratsy kalitao” ao min'ny firenena
Manahy ny Thai Film Journal fa antony hafa no nitahirizana  ireo zazarano ireo tao amin'io toeram-pivavahana io
WomenLearnThai:  @Thai_Talk Zazarano 1500 hafa tao Wat Phai Ngern Chotanaram… Tena ohatran'ny marary aho izany.
thegreglowe:  Mampiseho mazava ny loza hita tany Wat Phai Ngern fa tokony hanavao ny lalàny mikasika ny fanalàn-jaza i Thailand ary tokony hanome an'ireo vehivavy ny fikarakaràna sahaza azy
Citybiitch:  Aoka mba hajanona amin'izay ny fitaterana ny vaovao momba ny fanalan-jaza e!! Na hovainao tahaka ny inona aza ny lalàna, mbola ho eo foana izany, adala!!
ResponseAP:  RT @juarawee: RT @tulsathit: Fanadihadiana Dusit — 65.6 % ny olona nohadihadiana no manaiky ny fanaovana ny fanalàn-jaza ho ara-dalàna. 12.6% tsy manaiky. 47% ny olona mino fa zon'ny tsirairay ny fanalàn-jaza.
isamare:  @bangkokpundit @tri26 nefa tsy tokony atao antony haneken'ny lalàna ny fanalàn-jaza izany fanambaràna izany
moui:  @kafeeme Te-hiteny fotsiny hoe raha misy moanina manaiky ny fanalàn-jaza dia tokony ho lehilahy tsotra ihany izy izany.
pracob:  Fimailo ho an'ny lehilahy dia pilina ho an'ny vehivavy, safidy tsara noho ny fanalàn-jaza izany. Na izany aza dia tokony hihetsiketsika ihany ny fanabeazana ara-pananahana
sinneyxx:  Andriamanitra o!! Inona no nitranga tany Thailandy? Manodidina ny 1000 ny fanalàn-jaza tao anatin'ny iray volana? Mandria am-piadanana ireo zaza ireo ☹
NCMissionsMom:  RT @tulsathit: Maherin'ny 2000 izao ny isan'ireo fatin-jazarano hita tao amin'ny toeram-pivavahana Pai Ngern. Loham-paka hita maso momba ny fanalan-jaza tsy ara-dalàna any Thailandy izany.
KhlongBangSue:  @forestmat tena mampalahelo sy mampatahotra. Tokony hiteraka horakoraka avy amin'ny vahoaka amin'ny lalàn'ny fanalàn-jaza ankehitriny izany sary izany
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/11/24/10877/
 fatin-jazarano 2000: http://www.thaiphotoblogs.com/index.php?blog=5&title=2000-fetuses-found-at-thai-buddhist-temp&more=1&c=1&tb=1&pb=1
 150 000 – 200 000: http://twitter.com/thai_intel/statuses/5826928879603712